WARARKA SOMALIA - XOG MUHIIM AH | WARAR SUGAN |
Category Archives: WARARKA SOMALIA
Wararka naga Soogaara Deegaano hoostaga Magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in Xarakada Al Shabaab ay dab qabadsiiyeen Gawaari Raashin ganacsi siday oo ku sii jeeday Koonfurta Soomaaliya. Waxaana la sheegay in Al Shabaab deegaanka Maroodille ee Gobolka Hiiraan ay ku gubeen 6 Gaari oo siday badeeco, kuwaas oo u rarnaa Ganacsato Soomaaliyeed. Dhinaca kale Ciidamo ka tirsan...
Maamulka Xiriirka kubada Cagta ee jubbaland ayaa soo saaray Dacwad ka dhan ah xulka kubada Cagta Gobolka Benaadir kadib Markii shalay Benaadir uu u Ciyaaray Ciyaaryahan Ajanabi ah oo u dhashay Kenya una Ciyaara mid kamida kooxaha Heerka kowaad ee Caasimada. Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to...
Muqdisho Ciidamada Ammaanka Gobolka banaadir ayaa goor dhow Gaari looga shakiyay in ay saaran yihiin Walxaha qarxa ku qabtay Nawaaxiga Ex Kontarool Afgooye ee Magaalada Muqdisho. Dhankale goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Gaariga laga shakiyay uu yahay Spacio, islamarkaana saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladdu ay baaritaano ku hayaan Gaarigaasi. HALKAAN...
Wasiir ku xigeenkii hore ee wasaarada warfaafinta galmudug haatana ka mid ah siyaasiyiinta reer galmudug axmed shire falagle ayaa ka hadlay heshiiskii taariiqiga ahaa ee ay dhawaan muqdisho ku gaareen galmudug ahlusunna wuxuuna heshiiskaas ku tilmaamay guul usoo hooyatay dadyowga daga gobalada mudug iyo galgaduud ee galmudug Siyaasi falagle ayaa sheegay in heshiiskaasi...
Dagaal haatan ka socda Magaalada muqdisho Gaar ahan Xaafada Buula xuubay kaas oo udhaxeeya Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya . Dagaalkaan oo ah mid xoogan ayaa waxaa uu ka dhashay muran la xariira Dhul ku yaalla halkaasi. ilaa hada Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka, waxaana dadka deegaanku ay bilaabeen Barakac, si ay uga fogaadaan waxyeelo ka...
Deg-Deg:-Duqeyn Diyaaradeed oo ka dhacaday Degmada Qoryooley
Saraakiisha Ciidamada Dowllada ee ku sugan Degmada Qoryoileey ayaa waxa ay faah faahin ka bixiyeen Howlgallo iyo Duqeyn ka dhacay qoryooley iyo degaano hoostaga degmadaasi. Taliyaha Ciidamada Dowladda ee degmada Qoryoley ee Gobalka Shabeelada Hoose Cali Maxamed Aadan (Cali Waaq) ayaa sheegay inta badan degaanada hoosyimaada degmada Qoryooley in laga saaray Al-Shabaab. Wuxuu...
Dhagayso:-Gudomiye Cali Gacal Oo Ka hadlay Go’aanka Xildhibaanada Galmudug ee Hishiiska Ahlu-suna
Maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay in ay jiraan xildhibaano ka tirsan Maamulka Galmuudg kuwaas oo ka soo horjeeda heshiiskii 6,dii Bishaan ay Muqdisho ku kala saxiixdeen masuuliyiin ka kala socotay Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna balse arrintaas been abuur lagu tilmaamay. Gudoomiyaha Baarlmanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in xiligaan aysan jirin cid ka...
Golaha Baarlamaanka oo maanta Akhrinta 2-aad Marinaya Miisaaniyadda 2018-ka.
Guddiga Wargelinta kulamada Baarlamaanka federaalka ayaa Xildhibaanada Golaha Shacabka u diray in kulankooda Maanta uu ku saabsanaan doono Akhrinta 2-aad ee Miisaaniyadda 2018. Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa gali raba Fasax balse waxaa hortaagan in ay ka gudbaan Miisaaniyadda 2018-ka oo ay meel mariyaan ama ay dib u celiyaan. Muddo Fasaxeedka Baarlamaanka ayaa gudaha...
Wasaaradda Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Dalka oo ka jawaabtay Dacwadii Jubbaland
Kulankan qado sharafta ahaa oo Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya ay u sameysay qeybaha kaladuwan ee Warbaahinta ayaa looga hadlayay habsami u socodka tartanka ciyaaraha Kubadda Cagta ee ka socoda magaalada Muqdisho iyo dowrka Warbaahinta ay ka qaadan karto in bulshadu ay u tabiso ciyaarahaasi. Kulanka kadib Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha...
Soomaaliya Oo ka qeyb galalaysa Shirka dhaqanka iyo Dalxiiska ee Cumaan+SAWIRO
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) oo ka qeybgalaya Shirka Caalamiga ah ee Dhaqanka & Dalxiiska oo lagu qabanayo magaalada Masqad ee dalka Cumaan ayaa maanta kulan la qaatay Xoghayaha Guud ee Hay’ada Dalxiiska Adduunka Mr Talb Rufai iyo mas’uuliyiin kale. Shirkan oo ah kii labaad ee Caalami ee Dhaqanka...